Kedu mgbe ụgbọ oloko ahụ ga-amalite? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraKedu mgbe ụgbọ oloko ahụ ga-amalite?
19 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Turkey
kedu mgbe ụgbọ oloko ga-amalite
Emere ụfọdụ iwu maka "oge mgbanwe". N'ihi ya, ụgbọ oloko ga-ebu ndị njem ikike ruru pasent 50. Agaghị ebugharị ndị njem ụgbọ oloko na ụgbọ oloko. Ndị njem ga-enweta tiketi tupu ha eruo. Ọ ga-anọdụ naanị n’oche ha zụtara. Ọ gaghị enwe ike ịga oche ọzọ. Enweghị mgbanwe na ọnụ ahịa tiketi. A ga-ehichapụ ụgbọ oloko.
Ọrụ ụgbọ oloko TCDD gụnyere eriri YHT!
Kedu mgbe Istanbul na ụgbọ ala Ankara ga-amalite?
Çerkezköy- Istanbul ụgbọ oloko ga-amalite